जाडोमा सेक्सको थप आनन्द कसरी लिने ? Kasthamandap Daily
जाडोमा सेक्सको थप आनन्द कसरी लिने ?
कतिय मानिस जाडो महिना शुरु भएसँगै आनन्दमय सेक्सको मज्जा लिन नपाइने भयो भनेर चिन्तिन हुने गरेको सुनिन्छ । त्यसको एउटै कारण हो अत्यधिक चिसोको कारण कपडा खोलेर सेक्स गर्न नपाउनु ।
जाडोमा प्रायः पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु कपडा खोलेर सेक्सको आनन्द लिन चाहँदैनन् । अझ भन्नुपर्दा महिलाहरु जाडो महिनालाई भन्दा गर्मी महिनालाई सेक्सका लागि उपयुक्त ठान्दछन् । तर, पुरुषहरु भने गर्मी महिना भन्दा जाडो महिनामा सेक्सको रुचि बढी राख्दछन् ।
जाडो समयमा कपडा शरिरबाट उतार्नु भनेको सजाय भन्दा कम होइन । यसकालागि तपाइले आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई तयार पार्नु पर्दछ । हरेक उपाय र तौल तरिकाबाट पार्टनर कपडा खोल्न तयार होस् ।
बेडमा यौन क्रियाकलाप भन्दा पहिले रेड वाइनका एक एक गिलास तयार गर्नुहोस् । रेड वाइन उत्तेजनाको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसले तपाइँलाई गर्मि पैदा गर्दछ र दुई जनाबिचको मायालाई थप उत्साहित पार्दछ । जसले सेक्सलाई अति उपयोगी बनाउँछ ।
दिनभर अफिसको कामको थकानका कारण तपाई सेक्सबाट टाढा नहुनुहोस् । वरु यसलाई प्रभावकारी बनाउन घर गए पछि तातो पानीले नुहाउनुहोस् जसले गर्दा तपाईको थकान कम हुन जान्छ र सेक्सका लागि तयार हुन सक्नु हुने छ ।
यौन जीवन सुखद् वनाउन बिछ्याउनाको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । सफा र न्यानो खालको तन्नाको प्रयोगले तपाईलाई यौन कार्यको लागी उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । फोहोर बेडिङले तपाईको जोसमा कमि ल्याउन सक्छ यसबाट बच्नको लागी उपयुक्त स्थान तथा कपडाको प्रयोग गर्नु आवस्यक हुन्छ । यी र यस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई ध्यान दिने हो भने जाडो महिनामा पनि सेक्सबाट आनन्द लिन सकिन्छ । – एजेन्सीहरुको सहयोगमा